कलर गर्न नपर्ने जापनिज प्रविधिको इँटा नेपालमै, कहाँ पाइन्छ कति पर्छ मूल्य ? – Your1click
कलर गर्न नपर्ने जापनिज प्रविधिको इँटा नेपालमै, कहाँ पाइन्छ कति पर्छ मूल्य ?
चिनियाँ इटाको विकल्पमा जापनिज प्रविधिको इटाको उत्पादन नेपालमै सुरू भएको छ।
हालसम्म चिनियाँ इटा प्रयोग गरी घर बनाउन सोचिरहेकाहरूको लागि यो नयाँ प्रविधिको इटा विकल्प बन्नसक्छ। सुपर इको ब्रिक इनोभेशन प्रालिले नेपालमै जापनिज प्रविधिको ‘वाटरप्रुफ’ इटा उत्पादन गर्न सुरू गरेको छ।
भक्तपुरको बागेश्वरीमा कारखाना स्थापना गरी कम्पनीले जापानिज प्रविधियुक्त इटा उत्पादन र वितरण सुरू गरिएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल लोहियाले जानकारी दिए। जापनिजहरूको १२ प्रतिशत लगानी रहेको उक्त कम्पनीले इटामा प्रयोग हुने रसायन पनि जापानबाटै ल्याउने गरेको लोहियाको भनाइ छ।
भक्तपुरको माटोबाट बन्ने यो इटा सिमेण्टसँग सजिलै जडान हुने गरी निर्माण गरिएको कम्पनीको भनाइ छ। सिमेण्टमा जडान गर्न सजिलो हुने र रंगरोगन पनि गरिरहन नपर्ने भएकाले यो इटाबाट निर्माण गरिएको भवनको लगानी अन्य भवनको भन्दा कम हुने लोहियाको दाबी छ।
हाल चिनियाँ इटा जसरी प्रयोग गरिएको छ ठिक त्यसैगरी यसको प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। हाल तीन कलरमा इटा उत्पादन गरिएपनि छिट्टै अन्य कलरमा पनि उत्पादन गर्दै जाने कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
हाल फिक्का, गाढा, र धेरै गाढा गुलाबी रंगमा इटा उत्पादन गरिरहेको लोहियाले जानकारी दिए। यो इटा हरेक हिसाबले किफायती भएको उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो इटा हलुका हुन्छ, सिधा हुन्छ रंग लगाउन पर्दैन’ लोहियाले सेतोपाटीसँग भने,‘सहजै यताउता पार्न सकिन्छ, भाँचिने, फुट्ने कम हुन्छ त्यसैले पनि यो किफायती छ।’ इटा बनाउनको लागि कुनै पनि इन्धन नचाहिने भएकोले वातवरणमैत्री भएको लोहियाको भनाइ छ।
इटाको मूल्य भने तीन प्रकारको रहेको छ। इटाको रंगअनुसार मूल्य निर्धारण गरिएको लोहियाले जानकारी दिए। ९ इञ्च (२३० एमएम) को इटाको मूल्य २२, २० र १८ रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीले फिक्का रंगको १८, गाढाको २० र गहिरो गाढाको २२ रुपैयाँ प्रतिगोटा इटाको मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कम्पनीले भर्खर उत्पादन सुरू गरेको र सबैतिर डिपो नभएपनि कम्पनीबाट सिधै अर्डर गर्न सकिने लोहियाले जानकारी दिए। त्यसको लागि कसैलाई इटा चाहिएमा कम्पनीको वेबसाइट, फेसबुकमार्फत वा फोनबाट सम्पर्क गर्न सकिने लोहियाले बताए।
← खोलामा डुबेर एक बालकको मृत्यु
काठमाडौंमा भुइँचालोको धक्का →
काठमाडौंमा भुइँचालोको धक्का
दशैं म तिका को साइत